सबैभन्दा महँगो फिल्म '२.०' को रिलिज डेट तय, रजनी-अक्षय हुनेछन् आमने-सामने
असार २७, २०७५ बिगुल न्यूज - DG
काठमाडौँ : रजनीकान्त-अक्षय कुमार स्टारर ‘२.0’ सबैभन्दा महँगो फिल्म भएको बताईएको छ। तर यसको रिलिज डेट कुनै न कुनै कारण अगाडी सरिरहेको छ। अब यसको रिलिज डेट फेरि एक पटक तय भएको छ। यो फिल्म यसै वर्ष आगामी २९ नोभेम्बरमा रिलिज हुनेछ।
यो फिल्म यसै वर्ष गत अप्रिलमा रिलिज हुने भनिएको थियो। त्यस पछि यसको रिलिज डेट अगस्तमा सारियो तर अगस्टमा अक्षय कुमारको ‘गोल्ड’ पनि आउँदैछ। त्यस पछि खबर आएको थियो कि यो फिल्म यस वर्ष २०१८ मा रिलिज हुने छैन। तर अहिले निर्माताले यसै नोभेम्बरमा रिलिज गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘२.०’ सबैभन्दा महँगो भारतीय फिल्म होर र रिलिजमा ढिलाईको कारण यसको खर्च बढ्दै गईरहेको छ। भारतको सबैभन्दा महँगो फिल्म भनिएको २.० लाई फिल्म उद्योगको सबैभन्दा प्रतिक्षित प्रोजेक्टको रुपमा देखिएको छ। यस फिल्ममा रजनीकान्त बाहेक बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार पनि नेगेटिभ लिड रोलमा छन्। साइन्स-फिक्सनमा आधारित यस फिल्मको बजेट करिब ४०० करोड रुपियाँ भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ।
केही समय अघि यस फिल्मको टिजर लिक भएको थियो। एजेन्सी
प्रकाशित : बुधबार, असार २७, २०७५०८:४६
आफ्नो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा हट तस्बिरले सामाजिक सञ्जालमा सनसनी मच्चाउँदै सञ्जय दत्तकी पत्नी
विराट सार्वजनिक गरे पत्नी अनुष्कासँगको यस्तो तस्विर!
‘कायरा’ को ट्रेलर सार्वजनिक: आर्यन र साम्राज्ञी दमदार अभिनय, फिलिपिन्सरका मनै लोभ्याउने दृश्य [ भिडियोसहित ]
यि हुन् बलिउडका चर्चित स्टारहरुको रोमान्टिक हनिमुन गन्तव्य!
विवादित फिल्म पद्मावतले गर्यो यस्तो ‘आक्रामक’ व्यापार, अजयको हलमा भयो यसकारण तोडफोड
सम्पूर्ण कपडानै खोलेर फोटोशुट गराईन् डेमी रोजले ! तस्विरमा प्रष्ट देखियो डेमीको फिगर !